iMovie masraxa Mac
Si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay waxaa la socda marka la eego shaqeynta guud ee iMovie u tahay in la xuso in is-dhexgalka ugu fiican ayaa waxaa sidoo kale looga baahan yahay in arrintan la xiriira. Si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay in arrintan la xiriira waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in user helo halleeyo lillaahinimada ugu wanaagsan guud ahaan arrintan la xiriira. Si loo hubiyo in user helo natiijada guud ee ugu fiican marka ay timaado isku-dhafan iMovie la Mac ka tutorial tan loo qoray si ay u hubiyaan in user uu ogaado waxa uu yahay ka dib.
Mac iyo iMovie
Mac iyo iMovie sida dhow ula xiriira in midba midka kale sida shaqeynta ee iMovie ku raaxaysan karaa in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah mar barnaamijka ayaa lagu rakibay badan Mac oo dhan waxaa sabab u ahaa xaqiiqada ah in alaabta loo horumariyo by Apple Inc iyo user u baahan yahay si loo hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka la rakibo badan Mac ah oo uu soo bixi goobta rasmiga ah si loo hubiyo in muuqaalada ugu dambeeyey oo la soo dhaafay waxaa lagu riyaaqay arrintan la xiriira. Waxaa jira dhowr forums online iyo blogs bixiya talooyin arrintan la xiriira iyo sabab la mid ah qaar ka mid ah si aad u wanaagsan codsatay iyo kuwa kale oo aan la codsaday ee sabab walba in talooyin aan la casriyeeyaa dhererka waqtiga iyo user aan la awoodin in ay aad u hesho sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira ka. Si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in talooyin ah in la soo bandhigi doono waa la bartay si ay u helaan ugu wanaagsan ee reer tutorial ee arrintan la xiriira.
5 talooyin iMovie Tiyaatarka
Si loo hubiyo in tiyaatarka iMovie la riyaaqay habka ugu wanaagsan waxaa lagu talinayaa si loo hubiyo in uu talooyin la socdaan tallaabooyinka loo raaco habka ugu fiican:
1. Sida loo arko clips iMovie Theatre on qalab kasta oo
Ka dib waa hab ah in ay tahay in la raaco arrintan la xiriira si loo hubiyo in natiijada ugu wanaagsan ahbaa arrintan la xiriira si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican:
a. User waxay u baahan tahay inay la soo wareegto si ay iCloud si loo bilaabo nidaamka habka ugu fiican:
b. Laga soo bilaabo iMovie Waddada in uu yahay in la raaco waa iMovie> door bidaan iyo sanduuqa ah ee si toos ah content in iCloud geliyaan waa in la hubiyaa in ay sii wadi:
c. Marka filimka waxaa uploaded in iCloud user markaas u baahan yahay inuu riix batoonka share iyo masrax ka dibna dooro:
d. Video ayaa ka dibna la uploaded in iCloud iyo user u xaqiijiso in uu soo daawaday iyadoo kooxdiisa qalab kasta oo uu doonayo in uu ka dhigi kartaa:
2. Sida loo diri tiyaatarka iMovie in iDevice
Waa arrin aad u fudud iyadoo la kaashanayo app macruufka ah in yimaado iMovie iyo sabab la mid ah geeddi-socodka waa in la raaco arrintan la xiriira waa sida soo socota:
a. The iMovie in ay tahay in la wadaago waxaa la samayn karaa iyada oo la garaaco button la wadaago. The tiyaatarka iMovie waa in lagu soo xulo arrintan la xiriira si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay:
b. Marka magaca filimka ku qoran si toos ah dhoofiyo doonaa in iMovie ee arrintan la xiriira si ay u hubiyaan in user helo natiijada ugu wanaagsan:
c. User ayaa markaas daawan kartaa Movie ku iDevice oo uu soo uploaded in iCloud sidan oo sabab u ah habka kor ku xusan. Waxa kale oo ay soo gebogebeeyay habka Dhameystiran:
3. Sidee in ay tirtirto filim ka tiyaatarka iMovie on Mac
Geedi socodka waa in la raaco arrintan la xiriira waa mid fudud xasilloon oo user xaqa u baahan yahay in la raaco tallaabooyinka hoose si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo:
a. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in clip in uu yahay in la tirtiro waa xaq riixi oo ka menu ka muuqata user ay u baahan tahay in la hubiyo in doorashada delete waxaa u suurta si loo hubiyo in user helo dhakhso ah:
b. Marka la sameeyo user la keeneen in doonaa si loo hubiyo in clip waa in la tirtiro doorasho la doonayo waa in la soo xulay si ay u hubiyaan in user helo natiijada ugu wanaagsan:
4. Keenista tiyaatarka iMovie
Marxaladani waxay sidoo kale waa mid aad u fudud iyo talaabooyinka soo socda ayaa la raaco si loo hubiyo in natiijada ugu fiican ee ahbaa arrintan la xiriira:
a. User wuxuu u baahan yahay in la raaco File Jidka> dejinta
b. Furmo suuqa cusub in booda waa in la isticmaalaa si loo hubiyo in uu jecel video laga keeno fudayd iyo qanacsanaanta iyo tan ayaa sidoo kale midkin ee buuxa:
5. Ku darista saamaynta video
Ka dib waa hab ah in ay tahay in la raaco arrintan la xiriira si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira:
a. User wuxuu u baahan yahay si ay u helaan kormeere ee tiyaatarka iMovie si loo hubiyo in hannaanka horumarka,
b. User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in xulashada clip hawlgeli video ah lagu daray si loo hubiyo in lagu daraa video ah in la ciyaaray ama user ka mid ah uu doonayo in ay la wadaagaan. Marka codsatay in buuxa habka sidoo kale halkan ku dhamaan doonaa:
User wuxuu hubin doonaa in sifooyinka barnaamijka ugu wanaagsan waxaa ku riyaaqay oo ka mid ah geedi socodka in lagu kor ku xusan la raacay habka ugu fiican ee ka dhigi kara. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah qalabka tahay in ay gundhig gudahood iMovie ah waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in la hubiyo in natiijooyinka waa kuwa ugu fiican sida user uu doonayo in ay noqdaan.
> Resource > iMovie > 5 talooyin iMovie masraxa Mac